काठमाडौं उपत्यकाकामा केही बुँदाहरु थप गरी यी नियम लागु हुने, बनाइदिने भयो सहज ! अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ? – Khabar Patrika Np
काठमाडौं उपत्यकाकामा केही बुँदाहरु थप गरी यी नियम लागु हुने, बनाइदिने भयो सहज ! अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: २२:२८:५९
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासनका कार्यालय काठमाडौंले वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी थप आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अत्यावश्यक सेवामा केही बुँदाहरु थप गरी आदेश जारी गरेका हुन् ।